Home Wararka Xildhibaanada KG ma iibsan doonaan sharaftooda mise qarankey badbaadin doonaan
Xildhibaanada KG ma iibsan doonaan sharaftooda mise qarankey badbaadin doonaan
Marka taariikhda loo noqdo MW Farmajo kama duwana sida uu ula dhaqmi jiray MW Maxamed Siyaad dadka reer K/Galbed, kuwaas oo uusan waligiis u dhiibin jagooyinka muhiimka ah sida Maaliyadda iyo Gaashaandhiiga, guddoomiye Barlaman iska dhaafe.
Sidoo kale MW Farmajo waxaa uu reer K/Galbeed ula dhaqmay si aad u liidata walina waa ku wadaa. Bal adiguba caqlaa leedahay bal intaan ila arag:
Jagada Gdomiyaha Barlamanka ayaa xoog iyo lacag wada socda looga qaaday Guddomiye Sharaf iyo aqoon dawladeed ay u dhan tahay xildhibaan Maxamed Sheekh Cusman Jawaari. Maalin cad ayaa kursiga laga ritay iyadoo la isticmaalayo qaar ka mid ah xildhibaanadda K/Galbeed oo fahmi waayey halka loo socdo.
Waxaa kaloo xilka la qaaday Sharif Xasan oo runtii reer K/Galbeed ka mudan inay taallo u dhisaan maadaama uu soo gaarsiyey reer K/Galbeed halka ay maanta siyaasadda Somaliya ka joogaan. Cidi ma oran wuxuu ahaa malaa’ig oo khaldaaad badan ayuu lahaa Laakiin wuxuu abuuray K/Galbeedda cusub. Haddaba maanta ayey lumin doonaan awooddaas haddi wax waliba u fulaan sida hadda ay dawladda Farmajo iyo Kheyre ku waddo.
Intaas loogama harin waxaa hadda la rabaa in xoog lagu saaro qof tiratira awoodooda oo ka amar qaata madaxtooyada Somaiya oo iyaga kala dila iskuna dira.
Haddaba dadka reer K/ Galbeed iyagoo intaas og, iyagoo xusuusan reer K/Galbeed waa Beec uu maalin walba la soo taagan yahay RW Kheyre maxaa la gudboon?
Inay ka midoobaan khilaafaadka dhexdooda oo ay ka fekeraan madax bannaanida dadkooda iyo dib isu ururinta siyaasiyiintooda.
Inay tusaan dawladda federaalka inaysan beec ahayn balsa ay yihiin dad xurmo iyo sharf leh oo danahooda qabsan kara.
Inay tusiyaan Frmajo inuusan ku jirin guri bir ah oo ay ka keenaan Mooshin si ay u beeneeyaan dareenka ah inay beec yihiin, wixi la rabanna uu ka sameysan karo. Sida Xamar keena oo nac nac u qeybiya, kadibna ku celiya Baydhabo. Maalina walbana badala balantooda doorashada inta ay ka daalayaan oo ay iska dhiibaan.
Inay iskaashi la sameeyaan xildhibaanaada Jubbaland, Puntland, Galmudug, H/Shabeelle iyo Puntland ee aaminsn in dalku uu u baaahan yahay isbadal lagu sharfan yahay ee aysan qolona beec ahayn.
Maanta waxaa u furan waddo ay ku soo ceshan karaan sharftooda, ku ridi karaan hogaankii danahooda ka hor yimaada, isla markaana u midoobi kara danaha reer K/Galbeed. Waa dhab in ceebta iyo sharf rididda ay wada qabaneyso dhammaan xildhibaanada reer K/Galbeed, laakiin dhadhamada waxaa helayaa koox yar. Marka u midooba inaad iska qabataan Farmajo inta uusan idinkala dilin oo uusan taladiinna la wareegin.
Previous articleXildhibaano lagu weeraray Baydhabo iyo khasaaraha
Next articleWasiir Beyle oo loo sheegay in uusan ku mashquulin isdifaac balse uu keeno cadeymo
Banaan-baxayaal xiray irida laga galo Madaxtooyada (SAWIRO)